Maitiro ekugadzirira yangu iPhone yeIOS 10 | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirira yangu iPhone yeIOS 10
Ignacio Sala | | iOS 10, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Inguva maawa mashoma Apple maseva asati atanga kuputa. Mumaawa mashoma vazhinji vachange vari vashandisi vasingazokwanisi kumirira zvakare uye vachada kurodha vhezheni yekupedzisira yeIOS 10 uye tanga kukanganisa neese ega ega ega enhau dzese dzinounzwa neshanduro yegumi yeiyo inoshanda sisitimu yemafoni uye mapiritsi eiyo Cupertino-based kambani. Kana iwe uine chero mibvunzo pamusoro pavo, iwe unofanirwa kungoenda kuburikidza nechinyorwa nemumwe wangu wandaishanda naye Pablo Aparicio kwaanonyatso tsanangura dzese nhau, kunyangwe idiki, idzo iOS 10 dzichatisvitsa.
Nguva dzese apo Apple painoburitsa vhezheni yekupedzisira yeanoshanda system, zvakanakisa, sekureba sekunge isu tisingatore yazvino iPhone modhi, kuita yakachena kuisirwa, ndokuti, kubva pakutanga, kunge tangotenga iyo iPhone uye chete yaive yaisa maapplication ayo natively anouya muiyo iOS inoshanda sisitimu.
Mugore rese iwe unonyatso gadza kunyorera kana mitambo kasingaperi kuyedza kuti uone kana uchivada kana kukodzera zvaunoda. Kunyangwe muzviitiko zvakawanda tinozvidzima, vanogara vachisiya trace pane yedu kifaa, kuteedzera nekufamba kwenguva kunogona kuve dambudziko rekuchengetedza pamwe nekuita kune yedu kifaa, saka chinhu chakanakisa kuita kuchenesa.
Dambudziko rinogona kumuka mune idzi kesi nderekuti tinogona kurasikirwa nemafaira kana kufambira mberi kwemimwe mitambo kana vasina kuwiriranisa neICloud. Muzviitiko izvi, isu tinofanirwa kuongorora kana tichigona kunyatso kurasikirwa iyo uye nekumirira kuti iyo application ivandudze ichipa iyi mukana, kana kana tikakwanisa kusevha mafaera eapp pasina iCloud uye tobva tavateedzera kuti vadzokere kuchishandiso kana isu tangodzosera iko kunyorera.
1 IOS 10 Inoenderana Midziyo
1.1 IOS 10 Inoenderana iPhone Models
1.2 IPad mhando dzinoenderana neIOS 10
1.3 IOS 10 Inoenderana iPod Models
1.4 Models isingawirirane neIOS 10
2 Matipi ekuvandudza yedu iPhone kana iPad zvakachengeteka kuIOS 10
2.1 Dzorera ne iTunes kana iCloud
2.2 Chenesa mafomu nemitambo yatisingashandise
2.3 Iva nepulagi batsira
2.4 Gadzira kopi yeruzivo rwese rwatinoda kuchengeta (kwete backup)
2.4.1 Maitiro Ekubvisa Mapikicha uye Mavhidhiyo kubva ku iPhone / iPad
2.4.2 Maitiro ekuburitsa magwaro kubva ku iPhone / iPad
2.4.3 Maitiro ekutarisa kufambira mberi kwemutambo kuburikidza neMutambo Center
2.5 Rangarira password yeApple ID yedu
3 Ini ndinogona kudzokera kuIOS 9.3.5?
IOS 10 Inoenderana Midziyo
Makore maviri ega ega, Apple inovhara pombi pane zvivhenekero kumatanho ekare. Makore maviri apfuura, iyo iPhone 4 yanga isingaenderane neIOS 8, saka izvo zvishandiso zvinoramba zvichishandisa iOS 7 isingakwanise kugadzirisa kune dzimwe shanduro. Pane ino chiitiko, yaive iyo iPhone 4s yaive yasara kunze, asi haisiriyo yega yemidziyo inogadzirwa nekambani isingazogashira iOS 10.
IOS 10 Inoenderana iPhone Models
IPad mhando dzinoenderana neIOS 10
IOS 10 Inoenderana iPod Models
Chizvarwa chechitanhatu iPod Touch
Models isingawirirane neIOS 10
Matipi ekuvandudza yedu iPhone kana iPad zvakachengeteka kuIOS 10
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuziva kuti nderudzii rweruzivo rwatakachengeta pane yedu kifaa kuti tiende kugadzira kopi.
Dzorera ne iTunes kana iCloud
Iyo inokurumidza uye yakachengeteka sarudzo kuitira kuti panguva yekugadzirisa maitiro zvachose hapana data, mifananidzo kana mavhidhiyo kubva kuchishandiso chedu akarasika kugadzira backup neTunesKunyangwe isu tichigonawo kuzviita kuburikidza neICloud, zvinoenderana nenzvimbo yekuchengetera yawabata uye nhamba yekushandisa.
Kana isu tikagadzirisa nenzira iyi, ruzivo ruchachengetwa pakombuta yedu kana muICloud kuitira kana chimwe chinhu chikatadza panguva yekuita uye isu tinofanirwa kudzorera kubva pakutanga. Dambudziko rekuita kugadzirisa kwerudzi urwu nderekuti marara ese awakaunganidza mugore rese, icharamba iri pachigadzirwa, ichideredza mashandiro ayo, saka zvinogara zvichikurudzirwa kuisa kubva pakutanga.
Chenesa mafomu nemitambo yatisingashandise
Kunyangwe zvingaite senge banal, iOS inogadziridza inoda yemahara nzvimbo kurodha pasi nekumisikidza. Zvirinani zvinokurudzirwa tine angangoita mashanu GB mahara mune yedu terminal. Mune iwo 16 GB mamodheru iyi inogona kunge iri mutambo wechokwadi, nekuti chaizvo yemahara isu tinongova neinenge 11 GB mushure mekudzikisira izvo zvinoshandiswa nehurongwa hwekushandisa. Nekudaro, mune emhando yepamusoro mamodheru, kunze kwekunge iwe uri mushandisi asingabvise chero chishandiso, haufanire kunge uine dambudziko kuve nenzvimbo yakakwana yekuirodha pasi pachigadzirwa chako uye nekugona kuiisa gare gare.
Iva nepulagi batsira
Kugadziridza, zvinoenderana nerudzi, kunowanzo shandisa yakawanda bhatiri. Kana tikataura nezve iyo kuisirwa kuburikidza neOTAZvingangodaro, iyo iPhone inomanikidza chishandiso kuti chivharwe mukati kuti tirege kupererwa nebhatiri panguva yekuita, izvo zvinogona kunge zviri dambudziko kuti mune yakanyanya mamiriro ezvinhu inokumanikidza kuti udzorere mudziyo kubva pakutanga.
Gadzira kopi yeruzivo rwese rwatinoda kuchengeta (kwete backup)
Kana iwe wakatsunga kuita yakachena kuisa asi iwe unoda kuchengeta ruzivo rwese iyo yawakachengeta semagwaro, mifananidzo, mavhidhiyo ... isu tinofanirwa kuburitsa irwo ruzivo rwese kubva kuchinhu uye tobva takuteedzera zvakare kuchinhu.
Maitiro Ekubvisa Mapikicha uye Mavhidhiyo kubva ku iPhone / iPad
Kana iwe ukashandisa gore rekuchengetedza sevhisi kuitira kuti ako ese mapikicha uye mavhidhiyo akaiswa otomatikiUnogona kusvetuka danho iri, nekuti iwe unongofanirwa kutarisa neiro sevhisi kana ichinyatso chengetwa kusvika pikicha yekupedzisira. Iwo anozivikanwa mabasa eIOS nhasi iICloud neGoogle Mifananidzo. Iyo yekupedzisira inotipa isingagumi yekuchengetera mugore chero bedzi iwo mapikicha asingapfuure 16 mpx kana mavhidhiyo ari mune 4k mhando. Kana zvirizvo, Google Mifananidzo inotipa mukana wekuiisa mu4k mhando, kudzikisira nzvimbo yainogara kubva pa15 GB iyo yainotipa mahara kana kuishandura kuita 1080p, kuti irege kutora nzvimbo yedu kota.
Kana iwe ukasashandisa chero eaya masevhisi iwe uchafanirwa kubatanidza iyo iPhone kune yako komputa, Windows kana Mac uye nyora manyore mifananidzo yacho pakombuta yako, kuti tizoteedzera zvakare kana tavandudza yedu terminal, chero bedzi isu tichifarira kuva navo nguva dzose varipo, hazvina kumbotaurwa zvirinani.
Kana iwe ukaita izvi maitiro kuburikidza neWindowsIwe unongofanirwa kubatanidza iyo iPhone kune komputa uye vhura iyo drive inomiririra iyo iPhone, tsvaga kuburikidza madhairekitori uye uite kopi. Zvisinei, kana uine MacPaunenge iwe wabatanidza iyo iPhone, iwe unogona kushandisa iyo Photos application kana Image Capture, sarudza mafoto nemavhidhiyo uye uzvikweze ivo kunongedzera kwaunoda kuvachengeta. Gare gare iwe unogona zvakare kuteedzera izvi zvemukati kudzokera ku iPhone yako, kana uchida, nekuyananisa izvo zvemukati zvefaira kuburikidza neTunes, sekunge sekunge tiri kuzviita neWindows.
Maitiro ekuburitsa magwaro kubva ku iPhone / iPad
Maitiro ekuburitsa magwaro kubva ku iPhone yedu kana iPad ari nyore pane apfuura, nekuti mune ese mashandiro masisitimu, OS X neWindows, zvakafanana. Kana tangobatanidza yedu iPhone kana iPad kune komputa, tinya pane chishandiso icon uye MaApplication. Zvese zvinoshandiswa zvatakaisa zvinozoratidzwa pazasi. Isu tinofamba tichienda pasi pechidzitiro uye tichaona kuruboshwe rondedzero yezvishandiso zvine musoro Wakagovaniswa mafaira, zvinoshandiswa zvinobvumidza kuwedzera mafaera yerudzi irwo kuburikidza iTunes.
Kuti titore zvirimo zvatakachengeta mumaapplication aya tinongofanirwa kubaya padziri, toenda kukoramu yekurudyi, kwatinogona tsvaga mafaera ese akagadzirwa nechishandiso pamusoro peavo vatakateedzera kare kana zviri izvo.
Imwe sarudzo yekubvisa mafaera kubva ku iPhone yedu kana iPad ndeyekusarudza ivo uye vatumire kuburikidza neAirDrop kana isu tiine Mac kana kuburikidza neemail, kuitira kuti gare gare isu tiite matanho akatsanangurwa pamusoro asi zvinopesana.
Maitiro ekutarisa kufambira mberi kwemutambo kuburikidza neMutambo Center
Shamwari dzangu, iri ibasa risingagone. Haufanire kutsvaga chero imwe sarudzo. Sarudzo chete yekugona kukurukura kufambira mberi kwemitambo ndeyekuti wana sync kuburikidza neICloud kana zvisina kudaro it is mission zvisingaite. Mumakore achangopfuura, mitambo mizhinji ine mhando iyi yekuenderana saka haufanire kutambura mune izvi. Pakutanga, zvaikwanisika kuita jailbreak, asi mushanduro dzichangoburwa dzeIOS, maitiro acho ave akaomarara uye hazvichisiri nyore kuzviita.
Rangarira password yeApple ID yedu
Iyi nhanho inoita kunge isinganzwisisike inogona kunge iri iyo yega chikonzero nei tisingakwanise kugadzirisa mudziyo wedu. Kana isu tiri vashandisi vasingawanzo kuisa zvinoonekwa uye izvo zvatinoisa zvakasununguka (uko kusisina kukosha kuisa password) zvingangove kuti isu takanganwa password yedu. Kana zvirizvo pTinogona kukumbira Apple rubatsiro kuburikidza ino webhusaiti.
Kana iwe uine chero mibvunzo panguva iyi, iwe unogona kubvunza kuburikidza nezvakataurwa pane ino chinyorwa uye iyo Actualidad iPhone timu ichafara kupindura chero mibvunzo iwe yaunogona kuve unayo.
Ini ndinogona kudzokera kuIOS 9.3.5?
Iyo yazvino vhezheni yeIOS 9 yakaburitswa nekambani yakaverengerwa 9.3.5, parizvino ndiyo yega irikusainwa nekambani yeCupertino-based. Kana iwe ukaona kuti yako terminal ne iOS 10 haishande sezvainofanirwa, uye iwe unosarudza kumirira Apple kuti itange yekuvandudza pamwe nekuvandudza mashandiro, Iwe unongova nemazuva mashoma ekuti uzviite, sezvo Apple icharega kusaina yazvino vhezheni yeIOS 9 mazuva mashoma mushure mekumisikidza zviri pamutemo iOS 10. Kana Apple ikangomira kusaina iyo vhezheni vhezheni yeIOS 9, hazvigoneke kudzikisira uye hatizombova nesarudzo kunze kwekuenderera neIOS 10 .
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirira yangu iPhone yeIOS 10
Zvakanaka kwazvo, pachave neanodzidziswa kune vedu vedu vane yeruzhinji betas yakaiswa?
Ndatenda zvikuru 😉
Kana iwe wakaisa iyo GM vhezheni, iyo yekupedzisira yakaburitswa neApple, zvinonyanya kuitika kuti ichave yakafanana vhezheni iyo ichaburitswa mangwana, saka haufanire kuita chero chinhu kugadzirisa. Zvakadaro, zvinogara zvichikurudzirwa kuita yakachena kumisikidza yeiyo yepamutemo vhezheni.
Mangwanani akanaka: inguva dza8: 13 nhasi, Chipiri 13 (izuva ripi kuburitsa iOS 10 kuSpain hahaha) uye ini ndakamuka ndine ziviso mune yangu iPhone Zvirongwa zvichindinyevera nezve software yekuvandudza kune iOS 10 apo iyo yekuvandudza inofanirwa Ichasvika masikati. Shuwiro yakanakisa
Kuiswa kwapera uye zvinondiudza kuti ndine iOS 10.0.1
Ndiyo vhezheni imwe chete inoratidzika kwandiri kubvira pandakwidziridzira kuGolden Master. Wakaisa mabheti here?
Ehe, ini ndagara ndiine veruzhinji betas uye mangwanani ano gadziriso yandakambotaura yakazviratidza kwandiri.
kuti makopi ekuchengetedza haaitiwo kopi yemafaira mukati meapurogiramu (zvinyorwa, nziyo, nezvimwewo), nei uchizviita nemaoko?
Pfungwa yekuzviita nemaoko haisi yekudzorera backup kana iOS 10 yaiswa, kudhonza mashandiro kana matambudziko ekushanda atanga tiinawo muIOS 9, asi kuti tiite yakachena yekumisikidza uye kuteedzera zvakare mafaera kana zvinyorwa izvo isu akange ambodaro.
Iwo ekuchengetedza makopi anosanganisira mimhanzi, kurira, mabhuku uye mafoto akawiriraniswa nePC? Ndokunge, kana ndikadzorera iyo kopi yakaitwa, ini ndichachengeta mimhanzi uye playlists pane iyo iPhone sezvandaive nazvo? Kutenda kwazvo.
Iyo yekuchengetedza ndiyo mufananidzo wezvose zvirimo zvaunazvo pane iyo iPhone, saka inosanganisira zvachose zvese kana iwe uchidzorera iyo backup yawakamboita kare.
Ndatenda zvikuru nemhinduro. Ini ndainyanya kutya kurasikirwa nemumhanzi, sezvo ndave ndiripo kwenguva yakareba uye zvaizonetesa kuigadzirisazve. Ndichadzorera ndisingatyi, ipapo. Thanks zvekare
Mubvunzo ungaratidzika kunge wakapusa asi inguva yekutanga kuti ndasarudza kuchenesa nekudzosa yangu iPhone6 ​​kubva pakutanga uye handina kumbobvira ndaendesa zvese zvirimo kune imwe saiti yacho. Ini ndinogona kuteedzera mifananidzo nemavhidhiyo nemaoko kukombuta, maapplication anogona kudzoreredzwa, asi mamwe mafaera senge sms, vanobata, zvinyorwa zveBooks, zviitiko zvekarenda, zvinyorwa, nezvimwe. Ndingaitevedzera sei kuti ndive nazvo zvakare? Kutenda kwazvo!!
Iwo maBooks magwaro, vanobatika, karenda, manotsi uye mamwe anowanikwa kuburikidza neICloud akachengetwa mugore, chero bedzi uine sarudzo iyi inogoneswa pane iyo iPhone, haufanirwe kuita kopi yadzo. Kana iwe parizvino uchikwanisa, ruzivo rwese irworwo rwunotowanikwa muICloud, kuitira kuti kana iwe ukagadzira yakachena yekumisikidza, paunogonesa iCloud zvakare uye neese aya sarudzo, ivo vanozoteedzera otomatiki kune ichangobva kuvandudzwa chishandiso kubva pakutanga.
Kana mabhuku ako eBooks asiri muApp Store, unogona kuarasa, kana zvadai, ita kopi yekumisazve. Nezve sms, pane maficha anokutendera iwe kuti udaro. Nezve iMessages, izvi zvakare zvakaponeswa mugore uye zvinotorwa zvakare kana iwe ukawedzera yako Apple account data.
ICloud yakakosha kune vanhu vane iyo iPad uye iPhone uye vanoda kuve nedata rakafanana pazvinhu zvese zviri zviviri, nekuti kana iwe ukachinja pane chishandiso chimwe, zvinobva zvachinja pane imwe.
Chimwe chezvinhu zvandisinganzwisise icho chisati chaponeswa muICloud iMessages. Kana iwe ukaisa kubva pakutanga unovarasa uye zvinonyadzisa.
Iyo iMessages kana chero chavanodaidzwa vanochengetwa muICloud.
Nguva dzese dzandinotumira imwe kana kuigamuchira, inozviratidza yega paPad uye Mac.
Ivo vanoonekwa hongu, asi kana iwe ukadzorera kubva pakutanga unovarasa.
Uye kunyangwe ukabvisa imwe paMac yako, haina kuibvisa kubva kune mamwe madhivha.
Mhoro, kana uchiita yekuvandudza kubva pakutanga, iwo mameseji uye mapoka eiyo WhatsApp chat angarasika ..?
Meseji mameseji kunze kwekunge waabvisa iwo nechishandiso kana arasika. WhatsApp inotaurirana kwete hazvo kana iwe wakamisa kopi yenyaya idzi muICloud. Tsvaga iyo WhatsApp sarudzo uye shandisa iyo kopi kuitira kuti kana iwe uchigadzirisa iwe unogona kudhaunirodha zvakare.
Tora backup yewhatsapp wozoidzorera uye haurasikirwe nechinhu. Kune izvo iwe unofanirwa kuve neICloud Drive yakamisikidzwa. Ndakazviita imwe nguva uye pasina dambudziko.
Mhoroi, ndinoda kubvunza mubvunzo nezve yakachena kuiswa. Iniwo ndiri kufarira kuiswa kwakachena, asi data rangu rehutano, rovedzo, nezvimwe, zvinodzimwa?
Ini ndinofunga neIOS 10 uye watchOS 3 vanogona kuponeswa mugore. Iwe unofanirwa kugadzirisa kune iOS 10 kuti uvaponese uye woita yakachena yekumisikidza gare gare kuti uachengete. Ipapo ini ndinozvisimbisa.
Zvinoenderana neApple webhusaiti isu tinogona kuita backup ye data reiyo Hutano app muICloud. Tsvaga iyo sarudzo kana iwe uchida kuichengeta, nekuti ini handina kuiwana.
Imwe yesarudzo dzekuchengetedza data rehutano ndeyekunyorera iyo backup paPC / MAC
Shamwari pachayo ini ndatoita zvese zvinoenderana kuti ndichengetedze ruzivo rwangu rwese, ivo chete vakashaya diki diki kutsanangura kuti ndeipi yakanakisa yekuisa sarudzo kubva pakutanga kana yakabatana nepc kana kuburikidza ota uye kana kune yekupedzisira ndinofanira kudzima mudziyo wangu wese isu varipano maawa mashanu chete ekugona kuvandudza ndiudzei kuti ndive ndakagadzirira
Mhoro otto chinhu chake kudzosera kubva pc ndiyo chete nzira yekuisa kubva 0. Kana yawanikwa unoibatanidza kuTunes wobva wadzvanya pakudzorera uye inokuudza kana iwe uchida kugadzirisa uye kudzorera uye uti hongu. Iyi ndiyo sarudzo yakanakisa asi yeuka kuti iwe unorasa data rako rese kunze kwekufona uye iCloud data kana iwe ukaipa kuti uchengete kopi uye wozorasa iyo kopi, zvese zvawakaita hazvizove zvakakosha chero chinhu. Shuwiro yakanakisa
Ndatenda zvikuru, ndatoiwana.
Joan Carles akadaro
Kuisa kubva ku0, iyo sarudzo yekutangazve kumisikidza uye sarudzo dziripo muKuseta, General?
Pindura kuna Joan Carles
Tvos10 haina kana chinhu chakakosha, ini ndinoenderera ne tvos iyo yaakaunza seyakajairwa
Luis Angel Marquez Vazquez akadaro
Mhoro, kana yangu yekubata ID isingashande, inogona kundibata kana ndichiisa IOS 10 nefoni yangu chengetedzo pane yakavharwa skrini.
Pindura kuna Luis Angel Márquez Vázquez
Diego t akadaro
ndatenda nerubatsiro nepost
Pindura Diego t
Mhoroi kwaziwai mangwanani, ndiri kuenda nebasas yeruzhinji uye ndine vhezheni 10.0.1 yakaiswa pane ese mairi iPhone 6s uye iPad. Pandinoda kushandisa iMessage pane iyo iPhone, iyo sarudzo yekudzvanya uye kubatisisa museve kuti zvisingaonekwe inki sarudzo zvionekwe, kumanikidza, kupopota ... hazvishande! Kune rimwe divi, pane iyo iPad kana…. Ndine dzimwe nyaya pazvinoitika zvakafanana. Iwe unoziva chero mhinduro!? Kutenda kuzhinji
yakagadziriswa, inoda kuremedza kudzikisira kudzikisira
Mhoro, mubvunzo, pakupedzisira kune yakasviba modhi muIOS 10 kana yakaramba iri mumakuhwa? Handina kuiwana… Maita basa.
Mumwe munhu anogona kundiudza kuti sei mushure mekugadziriswa uye kuita kuti kodhi yekodhi ishandiswe, zvakaringana kubaya bhatani repamba kaviri kuti usvetuke rakanzi rakakiiwa
Ndine mubvunzo, ndinodzoreredza yangu iPhone 6s Plus kubva kuTunes kuti ndigadzirise kune iOS 10 uye iMessage ine FaceTime haina kumisa, ivo vanoramba vakamirira kuisirwa uye ipapo activation yekukanganisa inoonekwa.
Yatove anopfuura maawa makumi maviri nemaviri ndapota, chero mhinduro?.
Mhoro!! Iwe unokurudzira kuvandudza uye kurasikirwa nejailbreak? iPhone 6s.
Iyo iPad mini (1) inotsigirwawo, edza kurodha pasi ipsw kubva kumagios uye iwe uchaona!
Pindura kuna noernandez
Mumwe munhu akazviisa paPad mini mini 2 yandinayo neIOS8 iyo yakabva kufekitori uye inondityisa, zvinoita kunge pfuti
Kuziva sei kana ini ndavharirwa paWhatsApp